Ingabe ilale nivulé amehlo? Funda ngezingozi kulesi simo!
Abanye abantu abakwazi empeleni ukulala ngamehlo ngokugcwele noma ingxenye evulekile. Yebo, lokho kuzwakala awfully njengomuntu isisho ibhayisikobho ethusayo, kodwa isimo sangempela - a lagophthalmos ebusuku. Lokhu kwenzeka uma Isivalo ayikwazi kancane noma ngokuphelele shaqa.
Kuyamangaza ukuthi leli yisimo lalivamile. Kufika amaphesenti angu-20 abantu abaphethwe yilesi sifo, futhi lokhu kwenzeka ngisho nezinsana. Kungaba ngofuzo, ngakho uma ulala ne namehlo akho avuleke, ingane yakho ingakwazi ukulala ngendlela efanayo (kodwa iningi lezingane, ngomqondo ongokomfanekiso, outgrow le nkinga).
Yini engabangela kulesi simo?
Nokho, uma ungumuntu omdala, kodwa namanje uhlushwa ebusuku lagophthalmos, kumele ubonane nodokotela - umgomo wakho oyinhloko. Uma ukulala ngamehlo akho avuleke, khona-ke akukho okuhle is hhayi kuqeda. Lapho amehlo zivaliwe, ubusuku ngabunye izinyembezi ukusiza ehlanzekile ukubuyisela i-cornea yakho. Yingakho lesi simo kungaholela amehlo omile, angaboni kahle, izifo ngisho nezinkinga umbono uma singelashwa.
Kodwa ukucasuka - hhayi inkinga kuphela odokotela ukuxwayisa. Dream ngamehlo evulekile kungaba uphawu izinkinga zempilo ezingathí sina ezifana unhlangothi, isifo yegilo, ebusweni ezinzwa ukulimala, ngakho uphethwe esifike izimbangela ebusuku lagophthalmos ungagcina impilo nokuphila kwakho lapho.
Njengoba awukwazi ukubona uqobo ngesikhathi sokulala, kunzima ukutshela uma une lesi sifo. Yize kunjalo, uma njalo uvuke amehlo omile futhi ukhathele, kuyilapho elibhekene nezinye ukulunywa futhi kukhathaze ngayo, kungase kube uphawu lokuthi amehlo akho kancane evulekile ebusuku. Ungaphinde ucele umlingani wakho ukubukela wena ukuthatha izithombe kini ngesikhathi ulele.
Ngenhlanhla, kungenzeka ukwelapha lesi sifo. Ngezinye izikhathi, ngaphambi kokulala, udinga ukugqoka buso zamehlo - konke okudingayo. Kodwa kukhona ongakhetha kuhlinzwa ezifana edonsa futhi ephakamisa leminyaka. Lokhu kwenziwa ukuqinisekisa ukuthi isivalo yayingase ivalwe ngokuphelele. Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha, nje musa ukuyiziba le nkinga, njengoba zingase zibe zimbi umbono wakho.
Awukwazi ukulala ebusuku? Blame zakho zofuzo
Imithetho ephumelela kunazo, yembula izimfihlo kanjani ukulala
Izimbangela ubuthongo ompofu: incazelo nezindlela emzabalazweni
Kungani umuntu ekhulumela elele
Mina njalo ufuna ukulala, kodwa Angiyithandi ke
I ukuqwasha ikhambi? Izidakamizwa amakhambi abantu
Wamafutha anti-inflammatory "Aurobin": yokusetshenziswa
Inkolo e Finland: izitayela zenkolo main
Umsebenzi Psychological and umsebenzi ngokomzimba. Ukubaluleka ngezinzuzo zokuvivinya umzimba kwabantu
Amagilebhisi "isikhumbuzo": incazelo ezihlukahlukene, ukunakekelwa, umkhiqizo kanye nokubuyekeza
Imigomo yokugcina yamadokhumenti enhlanganweni
Indlela ukukhetha indawo esakhiweni esisha ngo Sochi futhi Adler emadolobheni
Kuyini a Fireball? Ukuthi baziphathe kanjani uma kubonakala?
"Umngani wami omkhulu uX Amafayela": ababedlala Scully. Umlingisikazi ngubani ejenti Scully
War movie mayelana ukuhlola. Uhlu amabhayisikobho engcono mayelana ukuhlola
Ubani owasungula le isibonakude lokuqala? Idivayisi nezinhlobo ngezibonakude
"Robocop" ifilimu: abalingisi, izindima, sakhiwo, amaqiniso athakazelisayo kanye nokubuyekeza